Duufaano Roobab Wata oo ku soo wajahan dalka Soomaaliya
Roobab Dufaan wata ayaa la filayaa iney ku soo beegan yihiin gacanka Carbeed 24 saac ee soo socda (Fiiri Jaantuska). Waxaa la sadaalinayaa iney ku soo siqaan Galbeedka Xeebta Gacanka iyagoo wata Roobab xoogan.
Hubin la’anta socodka xawaaraha dufaantaan ayaa la saadaalinayaa iney saameynta ugu badan ku yeeshaan Koonfurta dalka Yamen iyo Woqooyiga Soomaaliya iyagoo khatar hoose ku leh dalka Jabuti marka la gaaro dhamadka Asbuucaan, sidaas waxaa lagu shaaciyey Barta Releifweb oo ka hadla arimaha bini’aadnimada.
Marka la eego sawirka xariiqda Gacanka Cadmeed, waxay u egtahay in roobabku u dhexeeyaa 50-100mm ay ku dhici doonaan labada xeebood ee Yemen iyo Soomaaliya, iyada oo ay ku dhowdahay iney garaaan roobabkan 250mm.
Dalka Soomaaliya oo weli ku jira roobabkii Gu’ga ayaa waxaa sababey in Gobolada Koonfureed ka dhacaan fatahaado wabiyada ah halka Gobolada Bariga fog ee Woqooyi Bari Soomaaliya ku yaryihiin xili roobkaan.
Saamayn ka dhalatay roobab ka da'ay Bakool
Soomaliya 18.05.2017. 07:16
XUDUR, Somalia- Roobab laxaad leh ayaa ka da'ay qaybo kamid ah Koonfurta dalka Somalia gaar ahaan gobolka Bakool, waxaana lagusoo waramayaa inay sameeyeen Daadad xooggan oo qaaday duunyadii ay dhaqanayeen reer guuraaga.
Deegaano xoos yimaada xarunta gobol ...
Dufaan Ku Soo Wajahan Dalka Soomaaliya
Soomaliya 10.10.2018. 01:25
Puntland oo ka digtay khatarta Roobab soo wajahan
Puntland 25.04.2017. 20:08